Kedu ihe bụ chi jiri n'ehihie: njirimara, ụdị, nkebi na mbido | Meteorology netwọkụ
Kedu ihe bụ chi jiri n'ehihie
Portillo nke German | 27/09/2021 15:57 | Astron
Otu n'ime ihe ịtụnanya kacha ju ndị mmadụ anya bụ chi jiri n'ehihie. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ amaghị kedu ihe bụ chi jiri n'ehihie. Chi jiri n'ehihie bụ ihe na -enyocha mbara igwe. Mgbe ụwa gafere kpọmkwem n'etiti ọnwa na anyanwụ, a na -atụba onyinyo nke ụwa nke ìhè anyanwụ kpatara n'elu ọnwa. Iji mee nke a, ahụ atọ nke eluigwe ga -anọrịrị ma ọ bụ nọ nso na "Sicigia". Nke a pụtara na ha na -etolite n'ahịrị kwụ ọtọ. Ụdị na ogologo oge chi jiri n'ehihie na -adabere n'ọnọdụ ọnwa dị na njikọ ya na orbital node, nke bụ ebe ngagharị ọnwa na -agafe n'etiti ụgbọelu nke anyanwụ gbara gburugburu.
N'edemede a anyị ga -agwa gị ihe chi jiri n'ehihie, kedu ihe e ji amata ya na ihe bụ mmalite ya.
1 Kedu ihe bụ chi jiri n'ehihie
2 Mmalite nke chi jiri n'ehihie
3 Ụdị ụdị chi jiri n'ehihie
3.1 Mkpokọta chi jiri n'ehihie
3.2 Anya ihu n'ehihie
3.2.1 Chi ojiji n'ehihie
5 Ụfọdụ akụkọ ihe mere eme
Iji mara ụdị chi jiri n'ehihie, anyị ga -ebu ụzọ ghọta ndò nke ụwa na -emepụta n'okpuru anyanwụ. Nnukwu kpakpando anyị bụ, ọ ga -emepụta ụdị onyinyo abụọ: otu bụ ụdị cone gbara ọchịchịrị nke a na -akpọ umbra, nke bụ akụkụ ebe akpọchiri ọkụ kpamkpam, na penumbra bụ akụkụ ebe naanị akụkụ nke ọkụ na -egbochi. . A na -enwe n'ehihie ọnwa 2 ruo 5 kwa afọ.
N'ime chi jiri n'ehihie, otu ihe atọ dị na mbara igwe na -etinye aka, mana ihe dị iche n'etiti ha dị na ọnọdụ nke akụkụ eluigwe ọ bụla. N'ime chi jiri n'ehihie, ụwa dị n'agbata ọnwa na anyanwụ, na -etinye onyinyo na ọnwa, ebe na chi jiri n'ehihie, ọnwa dị n'etiti anyanwụ na ụwa, na -etinye ndò ya na obere akụkụ nke ikpeazụ. .
Mmadụ nwere ike ịhụ ebe chi jiri n'ehihie site n'akụkụ ọ bụla n'ụwa, na enwere ike ịhụ satellites site na mbara igwe na n'abalị, ebe n'oge chi jiri n'ehihie, a pụrụ ịhụ ha nanị ruo oge ụfọdụ n'akụkụ ụwa ụfọdụ.
Ihe ọzọ dị iche na chi jiri n'ehihie bụ na chi jiri n'ehihienkezi nke minit 30 ruo otu elekere, ma ọ nwere ike were ọtụtụ awa. Nke a bụ naanị nsonaazụ nke ụwa buru ibu karịa obere ọnwa. N'ụzọ megidere nke ahụ, anyanwụ dị ukwuu karịa ụwa na ọnwa, nke na-eme ka ihe ịtụnanya a dị mkpụmkpụ.
Mmalite nke chi jiri n'ehihie
A na -enwe n'ehihie ọnwa 2 ruo 7 kwa afọ. Dabere na onodu nke ọnwa gbasara onyinyo nke ụwa, Enwere ụdị chi jiri n'ehihie 3. Agbanyeghị na ha na -eme ugboro ugboro karịa chi jiri n'ehihie, ha anaghị eme oge ọ bụla ọnwa zuru ezu n'ihi ọnọdụ ndị a:
Ọnwa ga -abụ ọnwa zuru oke, ya bụ, ọnwa zuru ezu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ihe metụtara anyanwụ, ọ bụ n'azụ ụwa. Ụwa ga -adịrịrị n'anyanwụ n'etiti ọnwa ka anụ ahụ niile dị na mbara igwe dịrị n'otu oge, ma ọ bụ nọrọ ya nso. Nke a bụ isi ihe kpatara na ha anaghị eme kwa ọnwa, maka na okirikiri ọnwa na -ehulata ihe dịka ogo ise site na chi ọbụbọ. Ọnwa ga -agabiga na ndò ụwa kpamkpam ma ọ bụ akụkụ ya.
Ụdị ụdị chi jiri n'ehihie
Mkpokọta chi jiri n'ehihie
Nke a na -eme mgbe ọnwa n'ozuzu gafere n'ofe ọnụ ụzọ ụwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnwa na -abanye na cone nke umbra kpamkpam. Na mmepe na usoro nke ụdị chi jiri n'ehihie, ọnwa na -aga n'usoro chi jiri n'ehihie: penumbra, chi jiri n'ehihie, chi jiri n'ehihie, ele mmadụ anya n'ihu na penumbra.
Anya ihu n'ehihie
N'okwu a, ọ bụ naanị akụkụ nke ọnwa na -abanye n'ọnụ ụzọ onyinyo ụwa, yabụ akụkụ nke ọzọ dị na mpaghara chi ojiji.
Chi ojiji n'ehihie
Ọnwa na -agafe naanị ebe mgbede. Ọ bụ ụdị kacha sie ike ịdebe n'ihi na onyunyo dị na ọnwa dị aghụghọ yana kpomkwem n'ihi na penumbra bụ onyinyo na -ekesa. Kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na ọnwa nọ kpam kpam na mpaghara chi ojiji, a na -ewere ya dị ka chi jiri n'ehihie; Ọ bụrụ na akụkụ nke ọnwa nọ na chi ojiji ma akụkụ nke ọzọ enweghị onyinyo, a na -ewere ya dị ka chi jiri n'ehihie.
Na ngụkọta ọnwa nke chi jiri n'ehihie, enwere ike ịhazi usoro dị iche iche site na njikọ ọnwa na mpaghara ọ bụla nwere ndò.
Chi jiri n'ehihie amalite. Ọnwa na -anọ na mpụga penumbra, nke pụtara na site ugbu a gaa n'ihu, otu akụkụ dị n'ime penumbra akụkụ nke ọzọ dị n'èzí.
Mmalite nke chi jiri n'ehihie. Site na nkọwa ya, ikpuchi chie anya nke ọnwa na -apụta na otu akụkụ nke ọnwa dị na mpaghara mbata ma akụkụ nke ọzọ dị na mpaghara mgbede, yabụ mgbe ọ metụrụ mpaghara mbata ụzọ, chi jiri n'ehihie amalite.
Mkpokọta chi jiri n'ehihie amalite. Ọnwa bụ kpam kpam n'ime oghere ụzọ.
Oke uru. Oge a na -eme mgbe ọnwa nọ n'etiti umbra.
Mkpokọta chi jiri n'ehihie agwụla. Mgbe ya na akụkụ nke ọzọ nke ọchịchịrị jikọtachara, ngụkọta chi anyanwụ ga -ejedebe, chi jiri n'ehihie na -amalitekwa ọzọ, chi jiri n'ehihie.
Chi jiri n'ehihie nke ele mmadụ anya n'ihu akwụsịla. Ọnwa na -ahapụ mpaghara mbata kpamkpam wee bụrụ chi ọbụbọ, na -egosi njedebe chi jiri n'ehihie na mmalite chi ọbụbọ ọzọ.
Chi jiri n'ehihie. Ọnwa apụọla n'abali, na -egosi njedebe chi jiri n'ehihie na chi jiri n'ehihie.
Ụfọdụ akụkọ ihe mere eme
Ná mmalite afọ 1504, Christopher Columbus ji ụgbọ mmiri mee njem nke ugboro abụọ. Ya na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ya nọ na ugwu Jamaica, ndị obodo ahụ wee malite inwe obi abụọ, ha jụrụ ịnọgide na -eso ha ekerịta nri, na -akpatara Columbus na ndị ya nnukwu nsogbu.
Columbus gụrụ n'akwụkwọ sayensị n'oge ahụ gụnyere okirikiri ọnwa na chi ga -eji n'ehihie n'ehihie, wee were ohere a. N'abalị nke February 29, 1504 chọrọ igosi oke ya wee yie egwu ịhapụ ọnwa ka ọ pụọ. Mgbe ndị obodo ahụ hụrụ ka ọ hapụ ọnwa ka ọ pụọ, ha rịọrọ ya ka o weghachi ya ka ọ dị na mbụ. O doro anya na o mere ya awa ole na ole ka chi jiri n'ehihie.
N'ụzọ dị otu a, Columbus jisiri ike mee ka ndị obodo kerịta nri ha.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe chi jiri n'ehihie na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu ihe bụ chi jiri n'ehihie